भारतले अर्जेन्टिनालाई हराएर हराएर रच्यो इतिहास
काठमाडौं, २१ साउन । भारतको अन्डर– २० फूटबल टोलीले स्पेनमा चलिरहेको कोटिफ कप २०१८ को प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनाको अन्डर–२० टोलीलाई २–१ ले हराएर इतिहास रचेको छ । भारतको ऐतिहासिक जीतका नायक अनवर अली रहे । उनले म्याचको ६८औं मिनेटमा फ्रिकिकलाई गोलमा परिणत गरेर म्याच भारतको पोल्टामा पारेका हुन् । म्याचको शुरूआतदेखि
कोहलपुर, २ असार । कोहलपुरमा जारी प्रथम उपमेयर क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा त्रिभुवन नमूना मा.वि. र जनज्योति भिड्ने भएका छन् । शनिबार सम्पन्न सेमिफाइनल समीकरणबाट त्रिभुवन र जनज्योति फाईनलका लागि छनोट भएका हुन् । शनिबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनल खेलमा साइनिङ स्टारलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै जनज्योतिले फाइनलमा आप्mनो स्थान सुरक्षित गरेको
काठमाडौं, ९ फागुन । देशकै सर्वाधिक धनराशीको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग– २ को अक्सन आज सम्पन्न भएको छ । धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाहीका अनुसार रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिगको अक्सन पनि सम्पन्न भएको र अक्सनमा विभिन्न ६ टोलीमा ७२ खेलाडीको भाउँ लागेको छ । नेपाली क्रिकेटलाई व्यवसायिकताको पथमा अगाडि
काठमाडौं । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टुमा नेपालले विजयी शुरुवात थालेको छ । नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा नामिबियालाई १ विकेटले हराएको हो । नामिबियाले दिएको १ सय ३९ रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले अन्तिम ओभरमा ९ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ । ४९ औं ओभरमा नेपालले जोडेको १३ रन खेल जित्न
आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक नामिबिया विरुद्ध टस जित्यो
आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुई अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक नामिबिया विरुद्ध टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको छ । खेल नामिबियाको डब्लुएपी मैदानमा सुरु हुँदैछ ।
काठमाडौँ । धनगढी क्रिकेट लिगको (डीपीएल)को दोस्रो संस्करण आउँदो चैत १७ गतेदेखि सुरु हुने आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए)ले जनाएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले खेलाडी दर्ता तथा अक्सनबारे जानकारी दिएको हो । प्रतियोगितामा ६ टोलीको सहभागिता जनाउनेछन् । अक्सनका लागि खेलाडी दर्ता बिहीबारदेखि सुरु भएको छ
तीन युवाको लगानीमा सिरुटारमा फुटसल सञ्चालनमा
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका १ सिरुटारका तीन युवाले रु. ६० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको फुटसल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ । कन्ट्रिसाइड रिक्रियशन सेन्टर फुटसलको आज नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा बस्नेतले अहिलेका युवा वर्गलाई बिदेश पलायन, बिकृति, बिसंगतिमा लाग्नबाट रोक्नु पर्ने बताउँदै विदेश जाने
सिंगो दाङको खेल क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने समाचार : फुटबल संघ
दाङ । दाङ जिल्ला फुटबल संघले शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एउटा अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचारले सिंगो दाङको खेल क्षेत्रलाई निरुत्साहित गराएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष भूपेन्द्रविक्रम थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सो अनलाइन कहाँबाट कसले सञ्चालन गर्छ र जिल्लाबाट यो अनलाइनमा कसले समाचार पठाउँछ भन्ने पनि थाहा नहुँदा समाचारको
विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगितामा एक्सीस विद्या आश्रम र ग्यालेक्सी स्कुल विजयी
धनगढी । धनगढीमा जारी डिसीए अन्तरगत विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज भएका खेलमा एक्सीस विद्या आश्रम र ग्यालेक्सी स्कुल विजयी भएका छन् । आज भएको पहिलो खेलमा पञ्चोदय उच्च माविलाई ९ रनले पराजित गर्दै एक्सीस विजयी भएको हो । टस जिते व्याटीङ गरेको एक्सीस विद्या आश्रमले पानी परेपछि छोट्याइएको खेलमा १०
डीपीएल २०७३ : सिवाइसी अत्तरियाको विजयी सुरुवात
धनगढी । सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को पहिलो खेलमा सीवाईसी अत्तरिया विजयी भएको छ । गत वर्ष भएको धनगढी क्रिकेट लिगको उप विजेता अत्तरियाले काठमाडौं गोल्डेन्सलाई ४० रनले पारजित गरेको हो । टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको सीवाईसी अत्तरियाले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १४६ रन बनायो
जापान गोजुरियो डो केन्वाकाईमा १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
काठमाडौं । जापान गोजुरियो कराते डो केन्वाकाई नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनले विदुर कुँवरको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ । सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विशन सिंह खड्का, उपाध्यक्षहरुमा रवि राना, विकास नगरकोटी, महासचिवमा राकेश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा रमेश अधिकारी, सचिवमा सुमन तिमल्सिना, सदस्यहरुमा सन्दीप थापा, सञ्जय रन्जीत,
हाम्रो पहुँचमा खेल दिवसको समापन
दाङ । हाम्रो पहुँच माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर ४ ले सञ्चालन गरेको खेल दिवसका अवसरमा आज पनि विद्यालयमा विभिन्न प्रतियोगिताहरु सम्पन्न भएका छन् । जसअन्र्तगत फुटबल खेलमा कक्षा ९ ले कक्षा १० लाई पराजित गरेको छ । महिलातर्फको ५ सय मिटर दौडमा ममता पुन प्रथम, दुर्गा बस्नेत दोस्रो र सपना सुनार
हापुर रमनामा विजयादशमीको अवसरमा खेल महोत्सव
घोराही । विजया दशमीको अबसरमा हापुरको रमनामा अटल युवा क्लवले खेल महोत्सव आयोजना गरेको छ । एक हप्तादेखि जारी खेल महोत्सवको आइतबार औपचारिकरुपमा समापन गरिएको छ । महोत्सवको अबसरमा महिला र पुरुष गरी करिव १ सय ५० बढी खेलाडीहरुले विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख
रुकुम । रुकुम जिल्लाको सबैभन्दा धेरै राशी पुरस्कार भएको łरुकुम कप फुटबल’को दोस्रो संस्करण आगामी कार्तिकमा हुन लागेको छ । रुकुममा भलिबल लगायत अन्य खेलहरु हुने भए पनि फुटवलको प्रतियोगिता भने कमै मात्रामा हुन्छन् । समृद्ध समाज नेपाल रुकुमले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो राशीको फूटवल प्रतियोगिता राखेपछि फुटबल खेलाडीहरुमा हौसला र
रुकुममा क्षेत्रीय खेलकुदका लागि को को खेलाडी छानिए ? (नामसहित)
रुकुम । जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुकुमले आगामी कार्तिक २७ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने क्षेत्रीय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि विभिन्न खेलका जिल्ला खेलाडीको घोषणा गरेको छ । महिला, पुरुष भलिबल, पुरुष फुटबलसहित मार्सल आर्ट अन्तरगतका विभिन्न खेलका खेलाडीहरुको घोषणा गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख छविलाल केसीले जानकारी